बुधवार, आश्विन १४, २०७७ ०९:५८:०४ युनिकोड
कोरोनापछी कसरी आउने !
बिहिवार, जेठ १, २०७७ शान्तिप्रिय
यस सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिदैे बितरक तथा निर्माता गोपाल कायस्थले भने – सिधै भन्नुपर्दा हामीले ठुला ब्यानरका चलचित्र तान्नुपर्छ । त्यसका लागी प्रमुख बिकल्प भनेको हलले पर्सेन्टेज बढी दीनुपर्छ । ताकी निर्माता हौसीउन् । हामीले सक्दो बढी पर्सेन्ट निर्मातालाई दीन सक्यौ भने निर्मातालाइ पनि केही भरोषा बढ्नेछ भन्ने लाग्छ । नयाँ राम्रा चलचित्र चलोस् ता की दर्शक हलसम्म आउन् । अर्को एउटा बिकल्प निर्मातालाई एमजी पनि हो । यसका लागी बिकाश बोर्ड जस्ता निकायबाट पहल गरी बितरक एवं हललाई न्यूनतम ब्याजमा पैसा दीनुपर्छ । त्यो ब्याजदर २ प्रतिशत भन्दा माथी हुनु हुदैन । यो पैसा निर्मातालाई एमजी दीएर सुरक्षित बनाउन काम लागोस् । नेपाल चलचित्र संघ एवं नेपाल चलचित्र निर्माता संघको समझदारी एवं परामर्शमा हामीले एउटा संयन्त्र बनाउन सक्नुपर्छ जसका कारण चलचित्र चलाउन सजीलो होस् । त्यस्तै चलचित्र बिकाश बोर्डको पहलमा चलचित्रकर्मी हरुलाई प्रदर्शन भवनलाई कर मिनाहा गरीदीनु पर्छ । हलहरु पनि यस कोरोना कहरमा पीडीत बन्न पुगेका छन् । अब राज्यले सम्बोधन गर्ने बेला आएको छ । चलचित्र बिकाश बोर्ड के का लागी भन्ने प्रश्न भोलि नउठोस् ! हलहरुलाई राहत दीन कन्जुसाई नदेखीयोस् । हलहरुलाई हामीले बचाउन सकेनौ भने न हल रहन्छन् न चलचित्र चल्छन् ।
यस सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिदैे नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसुदन प्रधान भन्छन् – सर्बप्रथम चलचित्र चलाउन निर्माता उत्त्साहित हुन सक्नुपर्छ । यसका लागि निर्मातालाई प्रोत्साहित गर्न सक्नुप¥यो । मनोरञ्जन आफैमा सबैभन्दा पछिको व्यवसाय हो । मान्छे स्वतन्त्र भएपछि मात्रै मनोरञ्जन खोज्छ । यसो त कोरोना त्रास बढीरहेको छ । संख्या दीनानुदीन बढीरहेको छ । यस अवस्थामा खुल्ने छाटकाट अहिले छैन र यतिखेर खुल्दै न पनि खुलेपछी राहत प्रदान नगरी केही हँुदैन । अव यो जुन ग्याप छ त्यो कसरी पुरा गर्ने भन्ने नै प्रमुख हो प्रधान भन्छन् । खुलेपछि मापदण्ड पुरा गरेर अगाडी बढ्न सकिन्छ । हलमा ४०० सिट छ भने १०० दर्शक राख्न सकिन्छ । प्रत्येक शोमा सेनिटाइजर, मास्क सबै व्यवस्था हुनुपर्छ । हलका कर्मचारी आधा घटाएर पालो गर्नुपर्छ । अव यस अवस्थामा निर्माता र प्रदर्शकलाई सरकारले राहत दिनुपर्छ । स्थानिय कर छुट हुनुपर्छ । चलचित्र विकाश बोर्ड, उद्योग वाणिज्य संघ जस्ता संस्थासँग परामर्श गरेर विभिन्न राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ । निर्माता र हामी विच परामर्श गरेर हामी लकडाउन पछि आउने छौं चलचित्र संघ अध्यक्ष मधुसुदन प्रधानले भने ।
अबको अवस्था के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीको राय भने यस्तो छ ः– राज्यले भने बमोजिम सामाजिक दुरी कायम हुनुपर्छ । अहिले हल खुल्ने र खोलिहाल्ने अवस्था छैन । एक न एक दीन त खुल्छ र हामीले सावधानि अपनाउनु पर्छ । आफुले निर्माता संघकाका तर्फबाट सरकार र चलचित्र विकाश वोर्डलाई पत्र थमाइसकेको र यो अवस्थाको मात्र होइन बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने कुरा समेत पत्र पठाएको अध्यक्ष अधिकारी बताउछन् । अहिलेको अवस्थामा सकारात्मक भएपछि हलमा सर्वप्रथम स्वास्थ्य सचेतना अपनाउँदै दर्शक ३३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताउँछन् । यसरी दर्शक घटेपछी लगानि त उठ्दैन । यस अवस्थामा सरकारबाट राहत हुनुपर्छ । २ वर्ष कमसेकम ट्याक्स छुट हुनुपर्छ । लोनमा ७५ देखि ५० प्रतिशत कर छुट पाउनुपर्छ । पुष मसान्त सम्म समय बढाइनुपर्छ । चलचित्रको लगानिको आधारमा २० प्रतिशत सहयोग दीनुपर्छ । रिलिज चलचित्रका सन्दर्भमा मात्र नभएर अब बन्ने चलचित्रमा पनि यो सुविधा हुनुपर्छ । होइन भने भोलि चलचित्र नै बन्न सक्दैनन् । कलाकार प्राविधिक हजारौ संख्यामा बेरोजगार हुन्छन् । यसैले सरकारले सहुलियत दिनै पर्छ । चलचित्र निर्माता, हल, ल्याव, स्टुडियो सबैलाई राहत हुनुपर्छ । अब चाडै विश्वभरी चलचित्र पु¥याउने वातावरण तयार हुनुपर्छ । डिजिटल प्लेटफर्ममा जानुपर्छ । दीर्घ कालिन सोच यतिखेरै आउनुपर्छ । एप्स निर्माण गरी कसरी विश्वमा चलचित्र पुग्न सक्छ र त्यसका लागि के कस्ता प्रयास गरिनुपर्छ भनेर सरकारलाई आफुले सुझाव दिइसकेको समेत नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: बिहिवार, जेठ १, २०७७, ०१:०३:००